Khiyaamooyinka lagu badbaadiyo guriga oo looga gudbo jiirada Janaayo | Bezzia
Tony Torres | 13/01/2022 10:02 | La cusbooneysiiyay 13/01/2022 10:21 | Guriga
Jiirada caanka ah ee Janaayo waxay u muuqataa mid qoto dheer oo adag in laga gudbo. Dhammaan kharashyada dheeraadka ah ee bisha Diisambar, waxaa lagu daraa kor u kaca qiimaha adeegyada aasaasiga ah. Kordhinta kharashyada kharash badan ku baxa in la wajaho oo haddii aan xisaabta lagu darin, waxay gebi ahaanba tuuri kartaa dhaqaalaha gudaha bilaha soo socda.
Sidaa darteed, tabahan lagu badbaadinayo guriga ayaa kaa caawin doona inaad si fiican u habayso kharashyadaada iyo waxa aad ka gudbi karto kharashka Janaayo, xitaa kaydka qaar. Iyadoo khiyaano yar iyo isbeddelka caadooyinka kuwaas oo sidoo kale waxay kuu ogolaanayaan inaad si fiican u qaybiso kharashaadka dheer sanadka oo dhan. Si aad uga fogaato inaad timaadid bilawga sanadka oo aad la kulanto kharashaadka dheeraadka ah ee bisha Diisambar.
1 Tabaha loo badbaadiyo
1.1 Dib u eeg kharashaadkaaga
1.2 U qorshee cuntooyinka toddobaadka
1.3 Ku badbaadi isticmaalka tamarta
1.4 Iska jir iibka
Tabaha loo badbaadiyo
Badbaadintu waa lama huraan, xitaa waa lama huraan, sababtoo ah si kasta oo aad dhaqaale ahaan iyo xirfad ahaanba u shaqeyso, dhacdo lama filaan ah ayaa dhici karta wakhti kasta. Furaash yar oo la badbaadsho waa xasilloonida maskaxda, waa xasilloonida maskaxda waana badbaado. Si kasta oo aad u malaynayso in aad badbaadin karto, sababtoo ah Mushahar-bixinnada ayaa badanaa aad u gaaban inta ay bilaha yihiin. Caadooyinka macaamilka waa meesha aad ku badbaadin karto lacag yar (ama weyn) taas oo dhamaadka noqon doonta shay muhiim ah.
Dib u eeg kharashaadkaaga
Marar badan lacagtu waxay ku baxsataa kharashyo aan loo baahnayn oo aynaan xisaabta ku darsan. Si taas looga fogaado, aad bay muhiim u tahay in si cad loo ogaado waa maxay kharashka lagama maarmaanka ah iyo waxa aan ahayn, sababtoo ah habkaas waxaan uga fogaan karnaa inaan lacag lumino bil kasta. Qor kharashyada go'an, kuwa loogu talagalay adeegyada iyo lacagaha aan isbeddelin bil kasta. Xisaabta qaado oo qor cadadka, lacagtaasi waa kharash guud oo ay tahay in la daboolo bil kasta.
Hadda xisaabi qiyaas ahaan waxa ku baxaya kharashyada ku jira gaariga wax iibsiga, haddii aad ku bixiso kaar, ka faa'iidayso si aad u hesho tiro sax ah. Ka faa'iidayso xaqiiqda ah inaad eegayso xisaabta bangiga si aad u aragto dhammaan kharashyada la sameeyay iyo kuwa aan loo baahnayn. Waa hubaal inay kugu yaabayso inta lacag ah ee aad ku bixisay waxyaabo aadan u baahnaynKaliya inaadan lahayn saadaal wanaagsan.
U qorshee cuntooyinka toddobaadka
Yuuro kale oo wanaagsan ayaa gala dambiisha wax iibsiga bil kasta, gaar ahaan marka waxa la iibsanayo aan si fiican loo qorsheyn. Wax macquul ah tan iyo haddaysan ahayn waxaad qorsheysaa cunto toddobaadka, way adag tahay in la sameeyo iibsi hufan. Maaha wax ku saabsan badbaadinta cuntada, ama dhimista tayada cuntada qoyska. Waxay ku saabsan tahay habee menu-ka, hubi meelaha cuntada lagu iibiyo oo samee liis iibsashada xaqa ah oo lagama maarmaanka ah. Sidan oo kale waxaad uga fogaataa inaad wax iibsatid inta lagu jiro usbuuca halkaas oo yuuro badan ay tagaan waxyaabo aan loo baahnayn.
Ku badbaadi isticmaalka tamarta
Tamartu waxay ku jirtaa qiimo aad u sarreeya, maalin kasta way isbeddelaysaa, maalin kastana way kor u kacdaa. Sababtan awgeed, aad bay muhiim u tahay in la ogaado saacadaha kharashka tamarta ugu badan si loo ogaado si loo badbaadiyo biilka korontada. Waa mid aad u fudud sababtoo ah maalin kasta waxaa lagu daabacay BOE, kaliya waa inaad la tashataa bogga internetka ee Shabakadda Korontada Isbaanishka. Iska yaree isticmaalka tamarta dheeraadka ah waqtiyada ugu sarreeya, waxaadna dhimi kartaa biilka korontada.
Iska jir iibka
Fasaxyada ka dib iibka jiilaalka ayaa yimaada waxayna u muuqataa inay qasab tahay qof walbana waa inuu kharash gareeyaa celceliska kharashkiisa si uu u hoggaansamo tirakoobka rasmiga ah. Wax shaki la'aan soo kordhinaya Kharashyada aan loo baahnayn ee sii adkeynaya jiirarka Janaayo. Iibso kaliya waxyaabaha aad u baahan tahay. Iibka ayaa aad u wanaagsan si loo badbaadiyo waxyaabaha daruuriga ah. Haddii aysan midna jirin, iska ilaali in lagugu jirrabo oo waxaad ka gudbi kartaa bisha ugu horreysa ee sanadka adigoo lacag bangiga ku jira.
Lacagtu waa shay lagama maarmaan u ah dadka intiisa badan. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la barto sida saxda ah ee loo maareeyo si ay u guto hawsheeda iyada oo aan dhibaato la kulmin. Tabahaan, waad awoodaa baro inaad wax yar kharash garayso oo kordhiso kaydkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Khiyaamooyinka lagu badbaadiyo guriga oo looga gudbo jiirada Janaayo
5 cunto oo ay tahay in aan lagu karin microwave